သို့အရီး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
News » သို့အရီး	6
Posted by ムラカミ on Aug 3, 2015 in News |6comments
ကျုပ် ရှာနေတဲ့ နာတာရှာ့ ဒေါ်လ်ကို တွေ့ပြီဗျ
nested loop ပဲ….
အဲ့ဒါ အတွေးကောင်းလို့ အရူး ပြောခံထိတာတော့ မှတ်မှတ်ရရပဲ….
မြစပဲရိုး says: ဘာတုန်း။ နာတာရှာ့ ဒေါ်လ်? ဘီကီနီ နဲ့ ကောင်မလေး ဘဲ တွေ့လယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
@QUIL@ says: ပြောပြီးပါပကော….. နက်စတက်လုပ်ပါဆို…
အဲလိုခေါ်တာ လူသိပ်မရှိဘု ထင်ရဲ့…
ရှိရင် ကျော် ခပ်စောစောကတည်းက ဂူးဂလင်းလုပ်ပြီးတွေ့ရောပေါ့ဗျာ…..
တကယ်တော့ …. ကြောက်စရာကြီးဗျ…. လှလွန်းလို့….
မြစပဲရိုး says: ” နက်စတက်” ဆိုတာ double code ထည့်ပြီး ရှာရမှာလား။ အင်တာနက် မှတော့ မဂူးဂဲ လို့ ရမလားဟဲ့။
@QUIL@ says: မေဘီ … အဲ့လိုခေါ်တာ သူပဲရှိလို့နေလိမ့်မယ်
ပြောပီးပါပကော … နာတာရှာ ဒေါလ်ပါဆို…
အဲ့ဒါအဖြေက နက်စတက်လုပ် မှန်း စောနကမှ သိပါတယ်ဆို…
မြစပဲရိုး says: သမီးတော်လေးက နာတာမရှာဘူး။ စက်ကွင်းလွတ် တယ်။
ကွကိုယ် သာ နာတာရှာနေပေတော့။
Good Morning & Good Night… :-))))
ဦးကြောင်ကြီး says: သို့အရီး